Sida Loo Bilaabto Ganacsi Illinois 2022: Hagaha Ugu Dambeeya
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabto Ganacsi Illinois 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Sida Loo Bilaabto Ganacsi Illinois 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Isha Sawirka: Britannica.com
Qaybta ganacsiga ee waddan walba waxay gacan ka geysataa kobcinta dhaqaalaheeda. Taasi waa sababta loogu qiimeeyo waddan kasta. Gobol sida Illinois oo loo yaqaan warshadaha wax -soo -saarka 4 -aad ee ugu weyn Gobolka United, waxaa jira qolal loogu talo -galay ganacsiyo badan.
Warbixintu waxay muujineysaa in Illinois oo lagu naanayso Land of Lincoln iyo Prairie States loo tixgeliyo mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ugu muhiimsan adduunka. Marka laga reebo waaxda adeegga, waaxda ganacsigu waa qayb kale oo sare u kacaysa gobolka.
Marka, haddii aad ka fekereysay sidii aad ganacsi uga abuuri lahayd Illinois oo aadan aqoon sida loo bilaabo, si dhow iila soco maqaalkan.
Maqaalkan, waxaan hoos u dhigay tusaha Tallaabo-tallaabo oo kaa caawin kara safarkaaga si aad ganacsi kasta uga samaysato Illinois. Intaa waxaa sii dheer, waxaan liis gareeyay qaar ka mid ah fursadaha ganacsi ee isbeddelaya ee aad ku dhex biiri karto gobolka.
Talada aan kugu siinayo waa inaad si taxaddar leh u akhrido joogsiga buuxa ee ugu dambeeya adigoon iska leexin. Waxaan sharraxayaa, waad ku farxi doontaa inaad sidaas samaysay!
Jadwalka tusmada hoose ayaa kaa caawin doona inaad si fudud u safarto!
Si aad uga fikirto inaad ganacsi ka bilowdo Illinois waxaa laga yaabaa inaad hayso macluumaad waxtar leh oo ku saabsan gobolka.
Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo xoogaa xaqiiqooyin ah oo ku saabsan gobolka oo laga yaabo inaadan runtii garanayn ka hor intaanan guda gelin sidii aan halkaas ganacsi uga bilaabi lahayn.
Ku saabsan Illinois
Sida laga soo xigtay Wikipedia, Illinois waa gobol ku yaal gobolka Dhexe ee Maraykanka. Waxay leedahay wax-soosaarka guud ee shanaad ee ugu weyn (GDP), dadka lixaad ee ugu badan, iyo 25-aad aagga ugu weyn dhammaan gobollada Mareykanka.
Gobolka waxaa lagu tilmaamay inuu yahay microcosm -ka Mareykanka oo dhan. Ka hadlida dhaqaalaheeda, waxsoosaarka guud ee gobolka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay US $ 909 iyadoo mushaharka ugu yar uu yahay $ 15 saac saac marka la gaaro 2025, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dalka.
Dhaqaalaha dawlad -goboleedku wuxuu ka kooban yahay Beeraha, Wax -soo -saarka, Adeegyada, Maal -gashiga, iyo qaybta Tamarta, iyadoo wax -soo -saarka uu ka mid yahay hoggaamiyeyaasha.
Waxaa jira in ka badan 1.2 milyan oo ganacsiyo yaryar ah oo ka shaqeeya gobolka Illinois. Ganacsiyadaan waxaa ka shaqeeya 2.5 milyan oo qof, taas oo ah 45.1% shaqaalaha gobolka iyo ku dhawaad ​​20% dadka oo dhan.
Ganacsiyada yaryar ayaa 99.6% ka ah ganacsiga gaarka loo leeyahay ee gobolka, taasoo ka dhigaysa qayb muhiim ah dhaqaalaha Illinois.
Maxay yihiin Shirkadaha Sare ee Illinois?
Waxaa jira in ka badan 100 shirkadood oo ku yaal Illinois laakiin waxaan qori doonaa kuwa ugu sarreeya. Hoos waxaa ku yaal liiska 10 -ka shirkadood ee ugu sarreeya Illinois:
1 Walgreen Co. Deerfield
2 McDonald ee Oak Brook
3 Boeing Chicago
4 diir Deerfield
5 United States Holdings Holdings Chicago
6 Sears Holdings Hoffman Estates
7 Mondelez International Deerfield
8 Adeegyada Deegaanka Veolia Northbrook
9 JLL Chicago
10 Abbott Woqooyiga Chicago
11 U -doodaha Daryeelka Caafimaadka Downers Grove
Waa Noocee Ganacsi Oo Aan Ka Bilaabo Illinois?
Markaad ganacsi ka sameyneyso Illinois waa inaad marka hore isweydiisaa naftaada, Noocee ganacsi ayaan rabaa inaan bilaabo?
In kasta oo su’aashani u ekaan karto mid fudud, haddii aadan aqoon buuxda u lahayn nooca meheradaha ka jira gobolka iyo kuwa mudan in la aado, waxaa laga yaabaa inaad qaadato go’aan khaldan.
Xusuusnow, in nooc ganacsi oo gaar ah uu jiro oo ku kobcayo gobol, micnaheedu maahan inay ku kici doonto gobol kale. Tani waa sababta ay u habboon tahay inaad haysato macluumaad mug leh oo ku saabsan meheradaha is -beddelka ah ee Illinois oo aad bilaabi karto.
Hoos waxaa ah noocyada dhismayaasha ganacsiga ee Illinois oo aad abaabuli karto meheraddaada cusub, oo ay weheliso sharraxaad kooban mid kasta.
Mulkiilaha Keliya iyo Shuraakada Guud
A Shirkadda Xannaanaynta Xaddidan
Iskaashiga Xaddidan ee Xaddidan
Tan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa hal nin ganacsi. Ganacsiga noocaan ah ee pf, mulkiiluhu wuu ka duwan yahay meheradda. Si aad u bilowdo meheraddan, milkiilaha la yiraahdo mulkiilaha keliya ayaa laga rabaa inuu iska diiwaangeliyo xafiiska karraaniga degmada ee diiwaangelinta sida waafaqsan Xeerka Magaca La Qaddariyay.
A Shuraako xaddidan
Ganacsiga noocan ah ee Illinois wuxuu ka kooban yahay shuraako guud iyo shuraako xaddidan. Wada-hawlgalayaashu kama qayb qaataan hawl-maalmeedka meheradda.
Shirkadda Xannaanaynta Xaddidan
Kani waa qaab aan ganacsi ahayn oo ganacsi samaynaya kaas oo siinaya milkiilayaasheeda mas'uuliyad xaddidan, socodsiinta cashuurta oo la dhex maro iyo dabacsanaanta hawlgalka iyada oo loo marayo ka qaybgalka maamulka ganacsiga.
Qaab dhismeedka ganacsi ee noocan ah, lamaanayaashu mas'uul kama aha deymaha, waajibaadka iyo deymaha ganacsiga.
Kani waa hay'ad sharci oo gaar ah waana qaabka ugu adag ee abaabulka. Shirkad ayaa laga yaabaa inay ka iibiso saamiyada saamiyada, kuwaas oo ah shahaadooyin muujinaya lahaansho, dad badan oo la doonayo.
Maxay yihiin Fikradaha Ganacsi ee La Heli Karo ee Illinois?
Illinois waxay leedahay tirada ugu badan ee bilowga ganacsi ee Badhtamaha Galbeed sannadkii hore iyo lixaad ee ugu sarreeya heer qaran. Sida laga soo xigtay Waaxda Ganacsiga iyo Fursadda Dhaqaalaha ee Illinois, 2020 in ka badan 169,500 meheradood ayaa ka bilaabmay Illinois.
Sidoo kale, gobolku wuxuu arkay ku dhawaad ​​45% koror ku yimid meherado cusub sanadka 2020 marka loo eego sanadkii hore. Taasi waxay ahayd kororka boqolkiiba ugu weyn ee sanad-dhaafka ah ee Midwest-galbeed iyo kan afaraad ee ugu weyn qaranka.
Waqtigan xaadirka ah, Illinois waxay leedahay in ka badan 100 ganacsi bilow ah oo ku baahsan dhammaan qaybaha gobolka. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Aad u xun, Urbana-Champaign
sir -doon, Bloomington-Caadiga ah
Dhaxalka Dhaxalka Ah, Bloomington-Caadiga ah
Daahfurka Suuqgeynta Dijital ah, Naperville
Tiyaatarka Filimada lagu wado
Shirkadda Ilaalada Amniga
Tilmaan-Tallaabo Tusaha Sida Loo Bilaabo Meherad Illinois
Markaad rabto inaad ganacsi ka bilowdo Illinois, waxaa jira dhowr tillaabo oo muhiim ah oo ay tahay inaad raacdo si aad u bilowdo oo aad u socodsiiso ganacsi faa'iido leh. Tallaabooyinkan waxaa ka mid ah:
Haysashada Fikradda Ugu Fiican
Qaado Qorshe Ganacsi oo Macquul ah
Codso Ruqsadaha iyo Ruqsadaha
Fur Bangiyada iyo Xisaabaadka Deynta
Hel Caymis Ganacsi
Hel Goob Jidh ahaaneed
Dhis Jiritaanka khadka tooska ah ee internetka
#1. Haysashada Fikradda Ganacsiga Ugu Fiican
Doorashada nooca shirkaddu bilaabi doonto waa tallaabada ugu horreysa ee noqota milkiilaha meheradda. Raadi fikrad la jaanqaadaysa damacaaga, hamigaaga shaqsiyeed, iyo kartida dabiiciga ah.
Sidoo kale, tixgeli xirfadahaaga, ilaha gacanta kuugu jira, helitaanka, iyo sababaha aad u rabto inaad ganacsi u samaysato.
Tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad diirada saarto markay arrimuhu adkaadaan oo aad u kordhiso fursadahaaga guusha.
Markaad ugu dambayn doorato mid, laba-hubi mudnaanta ka dambaysa fikraddaada ganacsi adiga oo isweydiiya afartaas su'aalood:
Fikirkaygu ma xalliyaa dhibaato?
Fikradaydu faa'iido ma leedahay?
Sidee ayay farsamadu u saamayn doontaa warshadayda?
Ma jiraa suuq fikradayda?
Si aad u bilowdo, kor u rog si aad u aragto liiska qaar fursadaha fikrad ganacsi Waxaan isku dubariday oo aan isla markiiba soo xushay!
#2. Qaado Qorshe Ganacsi oo Macquul ah
Tallaabada xigta ee la qaadayo waa in la helo qorshe ganacsi oo jilicsan oo macquul ah. Habka ugu fudud ee lagu ogaan karo guusha meherad kasta xitaa ka hor intaan la abuurin waa habka qorshaynta.
Haddii aadan qorsheyn, waxaa jira dareen kasta oo aad ku guul darreysato meheradda iyadoon loo eegin xirfadahaaga iyo ilaha aad heli karto.
Marka, waxaa habboon in ka hor intaanad maalgelin ama bilaabin ganacsi, aad qorshe abuurto. Qorshuhu wuxuu u adeegaa sidii khariidad waddo oo kugu hoggaamin doonta safarka!
Way adkaan kartaa in lala yimaado magac shirkad. Waxaad dooneysaa inaad doorato magac summad leh oo u hoggaansan tilmaamaha magacaabista Illinois, xusuusna u leh macaamiishaada, waxaana loo adeegsan karaa URL ahaan.
Sidaa darteed, markaad tixgeliso waajibaadka kor ku xusan, waxaad dooran doontaa magac adiga iyo suuqa bartilmaameedkaagu si fudud u xafidi kartaan. Si arrintan loo sameeyo si wax ku ool ah, waad awoodaa
Ka Fiiri Google Magacyo Sahlan si aad ugu dhawaaqdo
Shirkadaha cilmi -baarista leh magacyo fudud
Samee raadinta domain
Dhamaystir raadinta LLC
Ogow, haddii aad rabto inaad samaysato a Shirkadda Xannaanaynta Xaddidan, waa inaad haysataa "Shirkadda Xannaanaynta Xaddidan”Ku lifaaqan magaca shirkaddaada. Waa inaad sidoo kale ka fogaataa ereyada iyo weedhaha qaarkood sida “shirkad,” “Corp.,” “la dhexgaliyay,” “Co.,” “Inc.,” “Ltd.,” iyo “LP.
Haddii aad sameyneyso shirkad, ereyada "shirkad," "isku -dar," "shirkad," ama "xaddidan" waa in lagu daraa laakiin laga soocaa ereyada kale ee magacaaga ganacsi.
Horumarinta Alaabta Cusub
Waa maxay dhibka ay shirkaddaadu xalliso? Maxaa ka dhigi lahaa badeecadaada ama adeeggaaga mid ka soocan dadka badan?
Sidoo kale, tixgeli qiimaha, tijaabinta, iyo falanqaynta markaad ka hadlaysid horumarinta badeecada. Habka wax -soo -saarku ma noqon doonaa mid aad qaali u ah? Faa'iido ma yeelan kartaa mise waxaad isku qodi doontaa god?
Iibka & Suuqgeynta
Soo ogow suuqa bartilmaameedkaaga; dad xiisayn lahaa waxa aad iibin doonto iyo sida aad ugu beddesho macmiil.
Dadka iyo Shuraakada
Waa maxay doorarka aad u baahan tahay inaad shaqaalaysiiso iyo xiriirrada xirfadeed ee aad u baahan tahay inaad samaysato si aad ugu guulaysato?
Tani waa inay noqotaa qaybta ugu weyn ee geedi socodka qorshayntaada. Hubi inaad haysato raasumaal kugu filan oo aad ku bixiso kirada, khidmadaha rukunka ee aaladaha ganacsiga, mushahar bixinta, suuqgeynta, iyo kharashyada kale.
Go'aanso inta macmiil ama iibin ee aad u baahan doonto si aad u jebiso.
#3. Samee Ganacsigaaga
Markaad dhammayso qorshaynta, tallaabada xigta waa inaad sameysato meheraddaada. Tani waa meesha diiwaangelinta meheraddaada sida hay'ad sharci ah ay ka soo gasho.
Diiwaangelinta meheraddaadu waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta kalsoonida waxayna sidoo kale kaa caawineysaa inaad ka ilaaliso mas'uuliyadda shaqsiyeed.
Asal ahaan, sameynta ganacsi waxay inta badan ku xiran tahay nooca ganacsiga. Taasi waa in la yiraahdo sameynta meheraddu way kala duwan tahay. Qoraalkan, waxaan ku siin doonaa aragti ku saabsan sida loo sameeyo ganacsi.
Sida loo Xereysto DBA ee Illinois
Si aad u samaysato DBA waxa kale oo loogu yeedhaa “lahaansho gaar ah”, “Sameynta Ganacsi Sida”, ama “Magac khiyaali ah”, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose:
Hubi magacaaga ganacsi adoo wacaya Diiwaanka Degmada ama booqanaya boggooda internetka.
Ka hel foomamka degmada si aad u diiwaangeliso DBA -gaaga. Degmo kasta waxay leedahay shuruudo xereyn oo u gaar ah, laakiin badankoodu waxay aqbalaan ikhtiyaarrada xaraynta onlaynka ah ee laga helo halkan.
Ku buuxi foomamka Degmada. Degmooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin foomka in la nootaayoo oo la daabaco.
Sida Loo Sameeyo LLC iyo Shirkad ku taal Illinois
Abuuritaanka LLC waa xulasho ku habboon inta badan ganacsiyada yaryar. LLC -yada ayaa ka fudud in la sameeyo oo la maamulo marka loo eego ururada kale ee shirkadda, waxayna leeyihiin daaweynta canshuuraha ee mudnaanta leh. Si aad u samaysato LLC hubi waxyaabaha soo socda;
Taasi doorashada magaca shirkadaada ayaa la heli karaa adoo baaraya Xogta Ganacsiga ee Illinoise iyo samaynta raadinta magaca ee mareegaha Gobolka Illinois.
Kadib, hel wakiil xirfadlayaal ah oo Diiwaangashan. Wakiilkani wuxuu ku siin doonaa cinwaankooda wuxuuna kuu soo gudbin doonaa wixii dukumiintiyo muhiim ah.
Xerey waraaqaha saxda ah oo leh Qaybta Shirkadaha ee Illinois oo loo yaqaan "Maqaallada Ururka".
Xusuusin: Waxaad ku samayn kartaa LLC gudaha Illinois $ 500.
Kahor intaanan soo koobin farshaxankan, aan ka hadalno sababta ay muhiim u tahay in la helo Wakiil diiwaangashan.
Sababta Wakiilada Diiwaangashan?
Meherad kasta oo ku taal Illinois waxaa laga rabaa inay yeelato wakiil diiwaangashan iyo xafiis diiwaangashan. Wakiilka diiwaangashan wuxuu u adeegaa sidii goob lagu kalsoonaan karo oo lagala xiriiri karo shirkaddaada iyo waaxda, isagoo ku helaya canshuur iyo dukumentiyo sharci ah.
Wakiilkaaga diiwaangashan wuxuu noqon karaa adiga, xubin ka tirsan LLC -gaaga ama shirkad 18 sano jir ah oo ku nool Illinois, ama adeeg wakiil oo diiwaangashan oo shati leh oo ku heli kara waraaqaha magacaaga.
Waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaarooyin ikhtiyaar wakiil kasta oo diiwaangashan, markaa akhri iyaga oo go'aanso waxa adiga kuu fiican.
Sida Loo Sameeyo Ganacsi Online ah
Ganacsi onlayn ah, waa inaad iska diiwaangelisaa magacaaga ganacsi sidii magac domain.
Intaas waxaa sii dheer, si aad uga fogaato arrimaha jebinta summada, waa inaad samaysaa jeeg summad federaal iyo mid gobol si aad u hubiso in magaca aad rabto inaad isticmaasho uusan la mid ahayn ama aad ugu eg magac hore loo isticmaalay.
#4. Codso Ruqsadaha iyo Ruqsadaha
Si aad canshuur iskaga diiwaangeliso, waa inaad iska diiwaangelisaa Waaxda Dakhliga ee Illinois (DOR). Canshuurta heynta loo -shaqeeyaha waa in laga diiwaangeliyaa DOR haddii shirkaddaadu shaqaale yeelan doonto.
Labada nooc ee canshuuraha, iyo sidoo kale canshuuraha kale ee shirkadda, waxaa laga diiwaangelin karaa khadka tooska ah websaydhka MyTax Illinois.
EIN (Lambarka Aqoonsiga Loo -shaqeeyaha)
Lambarkan waxaa ku siin doona IRS haddii shirkaddaadu shaqaale leedahay ama si gooni ah canshuur looga qaado.
Xataa haddii aanad sharci ahaan ku xidhnayn inaad yeelato EIN, waxaa jira dhowr sababood oo ganacsi oo sidaas loo yeelo. Marar badan, bangiyadu waxay codsadaan EIN si ay u furaan koonto ganacsi, iyo shirkado kale oo aad ganacsi la leedahay ayaa iyaguna weydiisanaya EIN si ay uga baaraandegaan lacagaha.
Ogsoonow, waxaad heli kartaa EIN adigoon bixin wax khidmad ah markaad buuxiso arjiga onlaynka ah ee mareegaha IRS.
Wakaaladaha gobolka ee kala duwan ayaa bixiya ruqsadaha sharciyeynta. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa ruqsadaha Deegaanka Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Illinois iyo ruqsadaha la xiriira shaqada Waaxda Shaqada ee Illinois.
#5. Fur Bangiyada iyo Xisaabaadka Deynta
Mid ka mid ah ujeeddooyinka hay'ad kasta oo ganacsi waa in lacag la sameeyo.
Dhab ahaantii, geedi socodka qorshaynta, dhinaca maaliyadeed ee meheradda oo ay ku jiraan kharashyada la filayo iyo dakhliga labadaba waa la tixgeliyaa.
Tani waxay muujinaysaa in dhisidda meherad aan lahayn warbixin maaliyadeed ay la mid tahay guri hawada laga dhisay. Taas ka sokow, furitaanka koonto bangi waxay gacan ka geysan kartaa in koontadaada shakhsiyeed laga ilaaliyo khatar kasta.
Tani waa sababta oo ah marka xisaabaadkaaga shaqsiyeed iyo kan ganacsi aan la kala bixin, hantidaada shaqsiyeed ayaa halis ku jirta.
Intaa waxaa sii dheer, lahaanshaha koontada amaahdu waxay kaa caawin kartaa inaad hesho kaararka amaahda iyo maalgelinta kale ee magaca ganacsigaaga, dulsaarka dulsaarka leh, khadadka sare ee deynta, iyo inbadan.
Si aad u furato koonto, waxaad ka eegi kartaa mid kasta oo ka mid ah Bangiyada Ganacsiga soo socda ee Illinois ee hoos ku taxan:
Bangiga BMO Harris
Bangiga Dhexe ee Midwest
Bangiga la shaqeeya
Bangiga Qaranka ee Woodforest
#6. Hel Caymis Ganacsi
Caymiska ganacsigu wuxuu ka ilaalin doonaa shirkaddaada iyo hantidaada shaqsiyeed saamaynta dhacdooyinka lama -filaanka ah sida dacwadda dhaawaca shaqsiyeed iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Bixiyaha caymiska ayaa kaa caawin kara go'aaminta ikhtiyaarada daboolista ugu fiican ee meheraddaada, oo ay ku jiri karto caymiska mas'uuliyadda guud si uu kaaga ilaaliyo dhaawaca shakhsiyeed iyo sheegashada burburka hantida.
Waxa kale oo laga yaabaa inay noqoto caymiska mas'uuliyadda internetka, kaas oo bixiya kharashaadka sharciga iyo dejinta haddii ay dhacdo jebinta amniga kombiyuutarka.
#7. Hel Goob Jidh ahaaneed
Meesha aad doorato inaad ka furato dukaan waa muhiim, ha ahaato badhtamaha magaalada Chicago, agagaarkeeda dhow, ama meel kale oo ka tirsan Illinois.
Fikradda ayaa ah in la helo meel leh kheyraadka ugu wanaagsan ee fududeynaya maareynta ganacsigaaga. Dhinac kasta oo meesha ka mid ah (oo ay jiri doonaan qaar), waa inay jiraan 3 sare.
#8. Dhis Jiritaanka khadka tooska ah ee internetka
Halkani waa halka laga dhisayo mareeg ganacsi oo rasmi ah. Ma jiro qof tilmaamaya in mareegaha shirkaddaadu ay tahay mid aad u fiican, laakiin waa inaad haysataa joogitaan dijitaal ah si dhab ahaan loo qaato.
Macaamiishu waa inay awoodaan inay Google adiga wax badan ka bartaan ganacsigaaga. Waa inay awoodaan inay aqbalaan lacagaha dhijitaalka ah. Xaaladaha qaarkood, waxay u baahan doonaan foomamka xiriirka iyo maaddada blogka si ay u ogaadaan waxa astaantaadu tahay.
10 caymis ganacsi oo ugu fiican sanadka 2022
Shaqooyinka Bixinta Degdegga ah ee loogu talagalay 18-jirka da'doodu tahay 2022
Ma waxaad tahay ganacsade doonaya inuu ku fuulo darajada ugu sarreysa bilyaneerka caanka ah ee adduunka?…
Sida Loo Bilaabo Meherad Kaaliforniya 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Si aad masaafadda wanaagsan uga baxdo Gobolka Dahabka ah, waa inaad taqaan sida loo dhex wado. Gudaha…
Faallooyinka Saamiyada Realty 2021 | Sharci ama Fadeexad Maalgashi Hantiyeed oo Cusub?
"Crowdfunding waxay noqon doontaa mustaqbalka sida inta badan ganacsiyada yaryar loo maalgelin doono." Kuwani waxay ahaayeen…
Shirkadaha ka ganacsada badeecadaha waa dad ama shirkado qiyaasa oo ka ganacsada badeecado kala duwan sida biraha, batroolka, beeraha…
Daqiiqad 50 akhri
200 Fikradaha Ganacsi ee ugu sarreeya Hindiya | 2021 Liiska Buuxa